Quique Setién oo sheegay inuu dareemo xanaaq iyo murugo marka aysan kooxdiisu si fiican u ciyaarin – Gool FM
(Barcelona) 17 Jan 2020. Macalinka cusub kooxda kubadda cagta Barcelona ee Quique Setién ayaa sheegay inuu dareemo xanaaq iyo murugo marka ay kooxdiisa guul ku gaarto 1-0, isla markaana aysan si fiican u ciyaarin.
Dhinaca kale tababare Quique Setién ayaa tilmaamay in Lionel Messi uu ku raaxeysanayo awood aad u weyn, isla markaana aysan macquul aheyn in mustaqbalka la arko ciyaaryahan isaga la mid ah.
Barcelona ayaa ku dhawaaqday Isniintii inay shaqada ka cayrisay Tababare Ernesto Valverde, waxayna badelkiissa u magacaawday macallinkii hore kooxda Real Betis ee Quique Setien, kaasoo saxiixay heshiis gaaraya ilaa iyo 2022.
Macalinka cusub kooxda Barcelona ee Quique Setién ayaa wareysi uu ku bixiyay maanta telefishanka kooxda Barca wuxuu ku sheegay:
“Waxaan jeclahay in kooxdeyda ay si fiican u ciyaareyso, tani waa sida kaliya ee aan guriga ugu laaban karo anigoo faraxsan”.
“Haddii aan ku guuleysto 1-0, waxaan ku farxi doonaa saddexda dhibcood, laakiin waxaan guriga ku laaban doonaa aniga oo xanaaqsan”.
“Saacadihii aan heshiiska u saxiixayay Barcelona waxay ahaayeen kuwa qiiro leh, waxaan ku noolaa mid ka mid ah maalmihii iigu quruxda badnaa noloshayda, si dhakhso ah ayay u dhacday, oo waxaan bilaabay inaan ogaado waxa igu dhacaya”.
Intaas kaddib Quique Setién ayaa wuxuu ka hadlay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi wuxuuna yiri:
“Waa ciyaaryahan qaas ah oo cajiib ah, isla markaana suurtogal ma noqoneyso in mustaqbalka la arko ciyaaryahan isaga la mid ah, wax walbana wuxuu u sameeyaa qaab wanaagsan, wuxuu kaga duwan yahay ciyaaryahan kasta oo kale ee weyn taariikhda kubada cagta”.
“Messi wuxuu muhiim u yahay tababare kasta, waa ciyaaryahan kooxdeyda ah hadda, waxaad dooneysaa inaad ka hesho natiijooyinka ugu fiican isaga, waxaadna dooneysaa inaad ku faraxdo, waadna ogtahay sida ay muhiimka ugu tahay kooxda, waa ciyaaryahan aadan u baahnayn inaad wax badan ka sii sheegatid”.